Forum serasera malagasy Ny Fitivana tsy irotorotona - Dinika forum.serasera.org
Ny Fitivana tsy irotorotona
Fitohizan'ny hafatra : Ny Fitivana tsy irotorotona
kloon - 17/04/2003 18:07
Zao ho an'ireo zay mampirafy ny sipany ah de zao :mbola marobe ireo tovolahy sy tovovavy tsy manana sipa ka anareo ny safidy.
"Sarotra ry retou ny miala @lalana efa nahazatra" Rà te-hiharitra anga ,tsy maninona e;tena tianao izy ?
>Any koa anie misy olona tena tia anao ka mandrasa kely.Ze te hamaly ahy de afaka manoratra amin'ny .
rooh - 17/04/2003 18:36
Tsy de tena azoko ny hevitra tinao ho tenenina amin'io soratra io?????
Afaka azavanao mazava kokoa ve io hevitrao io azafady raha azo atao e!
levondraky - 06/05/2003 14:52
Mbola marobe hono ny lehilahy sy vehivavy "libres", ka mahazo misafidy malalaka ireo te hanampy ny isan'ny sipany e! mazava ange izany e!. Anarina mba hiandry kely indray ireo mitia olona efa manam-bady na efa manan-tsipa. Mazava koa izany. Feno olona "amoureux" hono eran'ny tanàna ka inona no itapikirana amin'ny efa an'olona. Asa raha azoko tokoa aloha izay nambaran'i kloon?
sifotra - 07/05/2003 19:33
zay nge no mahatonga le teny we : 'ny fitiavana tsy irootrootona" e !
lesabotsy - 17/05/2003 20:10
Marina fa raha efa manambady ilay olona dia aleo misintakasatria efa nifiy ilay olona tiany hiaraka aminy "rahatrizay" izy. Fa raha mbola sipa "fotsiny" kosa dia ataoko hoe diso izay miraviravy tanana satria mbola eo ampifidianana izy ka mety ianao no tiany mihoatra ilay taloha. Hoahy manokana dia tsy de azoazoko lôtra le hoe " ny fitiavana tsy irotorotona" fa alaoko hoe:"ny fifidianana no tsy irotorotoana" satria mety misy olona hafa tianao kokoa atsy ho atsy sa ahoana?
hery - 17/05/2003 14:11
Tsy irotorotoana... izany hoe aza maika mivadika, aza maika ny hanova, aza mirotoroto. Fa mba mahareta. Matoa izy tsy miteny hoe tsy tia anao, matoa izy mbola manafina aminao ny hafa dia mety ianao ihany izany ilay voafidy. Raha miala moa ianao, inona no azony atao?
anjakely - 20/06/2003 17:37
ka refa tia kosa ary de aôna e! samy tiko dahlo ry zareo de tsy mahazo zany!
rinakely1 - 08/11/2003 10:25
Zao reto no tiako ambara an: refa an'oln reto le viavy na lehilahy d mba avelao ho azy fa mampijaly ange izany ampirafesina na angalarin'olnkafa ny mba any anjaranao e! Aza mirotoroto fotsiny fa ho tonga eo ihany lé mba nofinofinao e!
Ny fanana ny hafa aoka ho azy ,mba tsy ande angalarin'ny hafa koa ny anao ka avy eo mibababa.